Global Voices teny Malagasy » ‘Playing For Change / Milalao Ho An’ny Fiovana’ Mampandroso Fihavanana sy Fampidirana Manerana Izao Tontolo Izao Amin’ny Alalan’ny Mozika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Aogositra 2016 8:08 GMT 1	 · Mpanoratra Marco Sarmiento Nandika (en) i Ellie Weekes, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Arzantina, Kolombia, Meksika, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ny tanjon'i Milalao ho an'ny Fiovàna  dia ny hampiray ny vahoaka amin'ny alalan'ny mozika. Tetikasa ara-kolontsaina mampifandray ireo mpanao mozika erantany amin'ny fampiasana hira ahafantarana azy manokana.
Ho an'ny mpamorona azy , mpanatontosa sady mpamokatra sarimihetsika, Mark Johson, tany New York no tonga taminy ny hevitra :
Ny ezaka nataony mba hitondra olona avy amina kolotsaina , foko, fivavahana ary fiaviana ara-politika samy hafa hiaraka amin'ny alalan'ny mozika dia nanomboka nandray endrika tamin'ny Martsa 2005 niaraka tamin'izay noheverina ho anisan'ireo hira tsara indrindra tamin'ny taonjato faha-20  — ‘Stand By Me’ an'i Ben E. King. Mpihira Amerikana Roger Ridley no nihira azy io teny amin'ny làlan'ny Santa Monica ao Kalifornia, ary avy eo, nampian'i Mark feo hafa sy feo voarakitra tany Barcelona, Irlandy, Afrika Atsimo, Inde, Nepal, sy ny Afovoany Atsinanana. Tamin'ny fotoana nanoratana, efa nahazo jery mihoatra ny 90 tapitrisa ny lahatsary tao amin'ny aterineto.
Roa taona taty aoriana tamin'ny 2007, dia nanorina fikambanana  iray nitondra anarana mitovy tamin'izany izy:
Ny fahombiazany dia nitondra azy ireo hanandrana indray any amina firenena hafa, ka tamin'ny 2012 dia tany Meksika ry zareo mba handrakitra ny ‘México lindo y querido’ (Meksika Tsara Tarehy sy Lalaina). Mikendry ny hanohana an'i Cauce ciudadano  (Fantson'ny Olompirenena), fikambanana fiarahamonim-pirenena izay miasa miaraka amin'ny tanora mba hiady amin'ny herisetra ao amin'ny firenena.
Ny taona manaraka, tonga tao Arzentina ny Milalao Ho An'ny Fiovana mba hanohana  ny hetsika fanentanana momba ny tontolo iainana antsoina hoe ‘Dejá tu huella: una Reserva con más Reservas’ (Apetrao ny Marikao: Valan-javaboahary miakara amina Valan-javaboahary Maro Fanampiny). Ny hira voafidy nantsoina hoe ‘Carnaval toda la vida’ (Karnavaly Mandramaty) avy amin'ny vondrona ska antsoina hoe Los Fabulosos Cadillacs.
Mbola mamorona fifandraisana any Amerika Latina ny Milalao Ho an'ny Fiovana ankehitriny. Tamin'ny 2015 niverina tany Kolombia mba hanohana  ny Betsalem, fitaizana zaza kamboty amin'ny tetikasany hamorona sekoly fianarana mozika, izay antenain'izy ireo avy eo mba fakàna tahaka ho an'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. Amin'ny 24 Septambra 2016, dia hankalaza ny Andron'ny Milalao Ho an'ny Fiovana ry zareo, izay hampiray mpanao mozika sy mpankafy mozika amin'ny alalan'ny hetsika 46 mitranga any amina firenena 21 ho fanohanana ireo tetikasa samihafa irotsahan'ny fikambanana.
Ao amin'ny kaonty Youtube-n’ ny fikambanana dia ahitana dikanteny maro avy amin'ny hiran'izy ireo, avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao, ary koa ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpandray anjara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/14/85295/
 Milalao ho an'ny Fiovàna: https://playingforchange.com/
 Ho an'ny mpamorona azy: https://playingforchange.com/team/mark-johnson/
 hira tsara indrindra tamin'ny taonjato faha-20: http://edition.cnn.com/2001/SHOWBIZ/Music/03/07/list.top.365.songs/index.html
 nanorina fikambanana: https://playingforchange.org/about
 Cauce ciudadano: http://cauceciudadano.org.mx/
 Andron'ny Milalao Ho an'ny Fiovana : https://playingforchangeday.org/
 kaonty Youtube-n’: https://www.youtube.com/channel/UCn25nZ12HEZq_w_m_1DmbbA